Mpanamboatra sy mpamatsy CE / 7KW | China CE / 7KW Factory
16A 32A 40A 48A Angovo Vaovao ...
Manamboatra US standard EV ...
16A 32A 40A 48A New Energy Electric New rindrina famolavolana mipetaka ev charger mpamily bateria fiara elektrika
Datasheets Fampidinana fidirana 230 ± 10% (dingana 1) 400 ± 10% (dingana 3) Fidirana ankehitriny 16 / 32A 16 / 32A Frequency 50Hz 50Hz Output amin'izao fotoana izao 32A 32A Mpampiasa fanamarinana RFID (ISO 14443） RFID (ISO 14443 LAN LAN ivelany (tsy voatery ) + Wi-Fi (tsy voatery) LAN (tsy voatery) + Wi-Fi (tsy voatery) Internal OCPP 1.6 JSON OCPP 1.6 Temperature Operation JSON -30˚C ~ 50˚C -30˚C ~ 50˚C Humidity Max. 95% RH Max. 95% RH Altitude ≦ 2000m ≦ 2000m IP IP65 IP65 Charging Outlet 5m mamehy tariby 5m manome tariby ...
Kalitao avo lenta ho an'ny Mode 3 32A Single Phase 3phase EV Charging Station
Kalitao avo lenta ho an'ny China EV Charging Station mpanamboatra, Wall Box Type2 Type1 EV Charging Station, azo antoka fa tena tokony hahaliana anao ireo zavatra rehetra ireo, ataovy izay hamelanao anay hahalala. Faly izahay manome anao teny nalaina tamin'ny fahazoana ny antsipirihany feno. Izahay dia manana ny mpanao R&D matihanina manokana hihaona amin'izay ilaina, Manantena ny handray ireo fanontanianao tsy ho ela izahay ary manantena ny hanana fotoana hiara-hiasa aminao ao anatin'ny ho avy. Tongasoa eto hijery ny fikambananay.
Wallbox Type 2 16A 7kw Dingana iray EV Charging Point EV Charger ho an'ny familiana fiara mifono vy
Monophase 32 amp miaraka amina output 7kW mode 3 fiantsonan'ny fiara elektrika dia mety amin'ny toerana rehetra. Ny socket an'ny Type 2 (IEC 62196) ary ny tariby tariby dia mifanaraka amin'ny fiara rehetra. Miaraka amin'ny laharana IP65 tsy misy rano / vovoka dia azonao atao ny miala sasatra mora foana ny familiana fiara mandritra ny alina na dia amin'ny orana aza. Ireo singa ireo dia vita amin'ny polycarbonate mitafy mafy avy any Japon. Izy io dia miaraka amina 30 Amp sy DC6mA namboarina mba hanomezana fiarovana be loatra sy fiarovana amin'izao fotoana izao.
Fanekena CE 32A 7kw EV Charger Fast Charger Fiarovam-piaramanidina herinaratra ho an'ny daholobe miaraka amin'ny Ocpp1.6j
OEM namboarina China EV Charging Pile, mampiasa ny rafitra mitarika an'izao tontolo izao ho an'ny asa azo antoka, tahan'ny tsy fahombiazana ambany, mety amin'ny safidin'ny mpanjifa manerantany. Ny orinasanay dia miorina ao anatin'ny tanàn-dehibe sivilizasiona, ny fifamoivoizana dia tena mety, toe-piainana ara-jeografika sy toekarena tokana. Manaraka famokarana olona mifototra amin'ny sanganasa, mifototra amin'ny saina izahay, manangana filozofia "raharaham-barotra mamirapiratra. Ny fitantanana kalitao henjana, serivisy tonga lafatra, vidiny mirary eto amin'izao tontolo izao no ijoroantsika eo amin'ny sehatry ny fifaninanana. consultation, faly izahay manompo anao.